Ukwesaba ngezindlela zayo ezahlukene kungakuthinta kanjani ukuhweba kwakho | I-FXCC Blog
Aug 13 • Ukuthengiswa Kwama-Forex Izihloko, Amazwana eMakethe • Ukubuka kwe-1367 • Amazwana Off kokuthi Ukwesaba ngezindlela ezahlukahlukene kungakuthinta kanjani ukuhweba kwakho
Izifundo ze-psychology yokuhweba kanye ne-mindset yakho azinikwa ukukholwa okwanele lapho kukhulunywa ngendaba yokuhweba kwe-FX. Akunakwenzeka ukubala umthelela isimo sakho sengqondo sakho esingahle sibe nawo emiphumeleni yakho yokuhweba, ngenxa yokuthi iyinto engaphatheki okungenakwenzeka ukuhlola. Ngaphakathi kwesilinganiso se-trader-psychology ukwesaba kubaluleke kakhulu futhi ukwesaba (maqondana nokuhweba) kungabonakala ngezindlela eziningi. Ungathola ukwesaba kokulahlekelwa, ukwesaba ukwehluleka kanye nokwesaba ukulahlekelwa (i-FOMO). Lezi yizincazelo ezintathu nje ezingafakwa ngaphansi kwesihloko se-psychology futhi udinga ukufaka ngokushesha izinyathelo zokulawula lokhu kwesaba, ukuze uthuthuke njengomhwebi.
Akekho kithina abahwebi abathanda ukulahlekelwa, uma uthathe isinqumo sokuthatha i-FX ukuhweba njengendlela yokuzilibazisa noma umsebenzi ongaba khona lapho (ngamagama alula) uthathe umfutho wokuzibandakanya ukwenza imali. Noma ngabe ufuna: ukwengeza imali oyitholayo, ukubeka imali oyisebenzisayo, noma ekugcineni ukuba ngumthengisi wesikhathi esigcwele ngemuva kwenkathi yemfundo enkulu nesipiliyoni. Uthatha lezi zinyathelo ngoba ungumuntu osebenzayo ofuna ukuthuthukisa impilo yakhe, noma yabathandekayo bakhe ngokuthola inzuzo yezezimali. Ngakho-ke ungumuntu oncintisanayo, ngakho-ke, awuthandi ukulahlekelwa. Kufanele ukwazi futhi ukwamukele lokhu kutholwa njengoba kungamandla amakhulu kakhulu azokusiza unamathele kulitshe lakho nokufisa kwakho ngezikhathi lapho kuhamba kuba nzima.
Kodwa-ke, kufanele ufunde ngokushesha ukuthi ungathathi ukulahlekelwa mathupha uqobo, wamukele ukuthi ukulahlekelwa ukuthengiswa komuntu ngamunye kuyingxenye yentengo yokwenza ibhizinisi kuleli bhizinisi. Abadlali be-tennis ye-Elite level abayinqobi yonke iphuzu, abadlali bebhola laphesheya abatholakali kuwo wonke amaphuzu adutshulwa egoli, badlala umdlalo wamaphesenti. Udinga ukuthuthukisa umqondo wokuthi ukuwina umklomelo akukhulunywa ngokuba ne-100% onqenqemeni lokwehluleka, kumayelana nokuthuthukisa isu lonke elinokulindela okuhle. Khumbula, ngisho ne-50: Icebo lokulahleka kwe-50 lokuwina ngokuhweba ngakunye lingasebenza kakhulu, uma ubopha imali eningi kulabo onqobayo kunalokho ulahlekelwa yilabo abakulahlekele.
Iningi labadayisi lizodlulela ezigabeni ezahlukahlukene zabathengisi be-metamorphosis, lapho beqala ukuthola imboni yokuhweba bazosondela ekuhwebeni i-FX ngentshiseko engenamkhawulo. Ngemuva kwesikhashana esifushane njengoba belungiswa embonini, baqala ukuqaphela ukuthi ukujwayela zonke izici zomkhakha kubandakanya: ukubumbana, amagama asemqoka kanye namakhono adingekayo ukuze aphumelele, kuzothatha isikhathi esithe xaxa nokuzinikela kunokuba ekuqaleni babelindele.
Ungasusa ukwesaba ukwehluleka ngokwamukela ama-truisms ahlukahlukene maqondana nokuhweba. Ngeke wehluleke ekugcineni uma ulawula ukuphathwa kwakho kwemali ngokulawula ubungozi. Ngeke wehluleke ngoba ngemuva kwesikhashana sokuchayeka embonini yezentengiselwano, uzobe ufunde amakhono amasha wokuhlaziya angabonakala ewusizo olukhulu uma udlulisela amakhono akho kwamanye amathuba emisebenzi; vele ubheke umzuzwana ukuqwashisa okwedlulele kwezindaba zezomnotho ozobhekana nakho. Ngeke wehluleke ngoba uzothola ulwazi oluzohlala nawe empilweni. Ungahluleka kuphela ukuhweba uma ungayihloniphi imboni futhi ungazinikeli kulowo msebenzi. Uma ufaka emahoreni amathuba akho okuphumelela azovuka kakhulu.
Sonke sizwe umuzwa wokuvula ipulatifomu yethu, ukulayisha amashadi ethu kanye nezinhlaka eziqondile zesikhathi nokubona ukusetshenziswa okuhle kwentengo okuhlobene ne-FX pair esidlulile, isimilo sokuziphatha okunganikeza ithuba elihle kakhulu lokuthatha inzuzo , ukube besisesimweni sokusebenzisa ithuba. Kufanele wamukele umqondo wokuthi la mathuba azobuya futhi, kuvame ukusatshalaliswa okungahleliwe phakathi kwamaphethini ahlukahlukene anganikela ngamathuba okwenza inzuzo. Udinga ukungakunaki ukwesaba ukuthi uphuthelwe futhi kungenzeka uphuthelwe futhi.
Uma ukhathazeka ukuthi amathuba angakudlula ngesikhathi sakho sokulala khona-ke faka isikhathi sokuthuthukisa isu elizenzakalelayo ngeplanethi yakho ye-MetaTrader, lokho kungasabela ngokuya ngamazinga athile entengo atholwayo. Izimakethe ze-forex zinamandla, ziyaguquka njalo futhi ziyavela njengoba kwenzeka imicimbi yezomnotho nezepolitiki. Akusoze kwavela ithuba elilodwa-elilodwa ohlulekile ukulisebenzisa, amathuba awapheli emakethe ewuke kakhulu futhi enkulu kunayo yonke emhlabeni.
« Zivikele ngaso sonke isikhathi lapho uhweba i-FX